Ikhwalithi Ephakeme Yokuthenga Okuguquguqukayo Kwezinto Eziphilayo Ezisetshenziswa Kabusha Isikhwama Sempahla Eco Esingalukiwe Ngaphandle Kwefektri Nabakhiqizi | Langhai
Ukuthenga Ngokwezifiso Kwe-Biodegradable Esetshenziswa Kabusha I-Eco Non-woven Tote Bag Ngaphandle Kwe-Lamination
Indwangu: I-80gsm-110gsm engalukiwe iyasebenza
(singakwazi ngokwesayizi yakho ukuncoma izinto ezifanele)
Igama lomkhiqizo Ukuthenga Ngokwezifiso Kwe-Biodegradable Esetshenziswa Kabusha I-Eco Non-woven Tote Bag Ngaphandle Kwe-Lamination
Okubalulekile I-80gsm-110gsm engalukiwe iyasebenza (singakwazi ngokwesayizi yakho ukuncoma impahla efanelekile)
Usayizi 40X 30X10CM, 40X33X10CM, 45X30X14CM noma yimuphi usayizi ngokwezifiso.
Izinhlobo Lamination I-Glossy Lamination / Matt Lamination / Laser Film Lamination / No Lamination, njll.
Imisebenzi I-Heat-Seal(Ultrasonic), "X" Ukuthunga, Ukuthunga Ngomshini, njll.
Ukuphrinta Ukuphrinta kukasilika, ukudluliswa kokushisa, ukuphrinta kwe-offset
Ukusetshenziswa Ukuthenga, Ukuphromotha, Isipho, Igrosa, Isuphamakethe, Ukukhangisa, Izingubo, Ibhodlela Lewayini, Umbukiso, njll.
Amandla Okukhiqiza Izingcezu ezingu-60000 eziphrintiwe ngokwezifiso zesikhwama esingalukiweyo ngenyanga
Ukupakisha ifakwe esikhwameni se-OPP, isikhwama sezingcezu ezingama-200 esipakishwe ebhokisini
Isenzo esisheshayo: sizophendula uphenyo lweklayenti phakathi nehora elingu-1.
Isevisi yobungcweti: kusuka ekuphenyweni -> yenza isampula -> qala i-oda -> ukuhlolwa-> ukulethwa
Sinesevisi ekhethekile engu-1 kuya ku-1 yeklayenti ngayinye.vumela iklayenti lilawule ngayinye
Isinyathelo sokuhleleka.Ngokusekelwe kusevisi yethu, ungalala kahle.
Ikhwalithi enhle: sinethimba lokulawula ikhwalithi lochwepheshe, qinisekisa ikhwalithi ye-oda
Iphelele kahle ngaphambi kokuthunyelwa.Vumela iklayenti lingalokothi likhathazeke ngekhwalithi.
Intengo ehambelanayo: ngeke sithi intengo yethu iphansi kakhulu, kodwa singasho ukuthi intengo yethu yilokho iklayenti
isidingo, ngokusekelwe ekusekeleni kwethu, uzothola okwengeziwe!
I-oda lenani elincane: samukela inani elincane le-oda, futhi sigcina amanani aphansi.
Ukulethwa okushibhile: Sinesaphulelo esikhulu nomthumeli, gcina izimpahla zifinyelela eceleni kwakho ngokushesha futhi ukuphepha.
1. I-MOQ: Ngemikhiqizo yethu eminingi, asinayo i-MOQ, futhi singakunikeza amasampula amahhala inqobo nje uma uzimisele ukukhokhela inkokhiso yokulethwa.
2. Inkokhelo: Samukela inkokhelo nge-T/T, i-Western Union, ne-PayPal. Ngama-oda yenani eliphezulu, siphinde samukele inkokhelo ye-L/C.
3. Indawo: Siyimboni etholakala e-Shanghai China.
4. Esikwenzayo: Senza izikhonkwane zensimbi, amabheji, izinhlamvu zemali, izindondo, amaketango okhiye, njll.; kanye nama-lanyards, ama-carabiner, abanikazi bamakhadi kamazisi, amathegi akhanyayo, amabhande asesihlakaleni e-silicone, amabhandeshi, izinto ze-PVC, njll.
5. Isikhathi sokuhola: Ukwenza isampula, kuthatha izinsuku ezi-4 kuye kweziyi-10 kuphela kuye ngomklamo; ukukhiqizwa ngobuningi, kuthatha izinsuku ezingaphansi kweziyi-14 kuphela ngobuningi obungaphansi kuka-5,000pcs (usayizi omaphakathi).
6. Ukulethwa: Sijabulela intengo encintisana kakhulu ye-DHL indlu ngendlu, futhi inkokhiso yethu ye-FOB nayo ingezinye eziphansi kakhulu eningizimu yeChina.
7. Impendulo: Ithimba labantu abangu-20 lime amahora angaphezu kwangu-14 ngosuku futhi imeyili yakho izophendulwa lingakapheli ihora.
8. Ukuqamba okusha: Ithimba labantu aba-4 eliklamayo selisungule kusukela ngo-2011, futhi manje sesivele sibambisene nezinkampani zobuciko, i-Top 500, i-Top 100, i-T-Mobile nezinye izinkampani zomhlaba wonke zama-500s.
9. Inani: abakhiqizi abangochwepheshe kuphela abangahlinzeka ngemikhiqizo emihle engabizi.
1. Ngingakwazi ukuthola amasampula omkhiqizo?
Ukuze uthole amasampula, sicela usithinte nge-imeyili noma nge-whatsapp.
2. Ingabe unayo ikhathalogi?
Yebo sinayo ikhathalogi. Ungangabazi ukusithinta ukuze usicele ukuthi sikuthumelele eyodwa. Kodwa khumbula ukuthi i-Artigifts ikhethekile ekuhlinzekeni ngemikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso. Enye inketho ukusivakashela ngesikhathi somunye Wemibukiso yethu yombukiso.
3. Isiphi isiqinisekiso enginaso esingiqinisekisayo ukuthi ngizolithola i-oda lami kuwe njengoba kufanele ngikhokhe kusengaphambili? Kwenzekani uma imikhiqizo oyithumele ingalungile noma yenziwe kabi?
I-Artigifts ibe sebhizinisini kusukela ngo-2006. Asikholelwa nje kuphela ukuthi umsebenzi wethu uhlanganisa ukwenza imikhiqizo emihle kodwa futhi nokwakha ubudlelwano obuqinile nobuhlala isikhathi eside namakhasimende ethu. Idumela lethu phakathi kwamakhasimende nokwaneliseka kwawo yizona zizathu eziyinhloko zempumelelo yethu.
Ngaphezu kwalokho, noma nini lapho ikhasimende lenza i-oda, singenza amasampula okugunyaza ngokucela. Kuyintshisekelo yethu futhi ukuthola imvume kukhasimende kuqala ngaphambi kokuqala ukukhiqiza. Lena yindlela esingakwazi ngayo ukuthenga "Isevisi Egcwele Ngemva Kokuthengisa". Uma umkhiqizo ungahlangabezani nezidingo zakho eziqinile, singakunikeza imbuyiselo esheshayo noma ukubuyisela ngokushesha ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Simise le modeli ukuze sibeke amakhasimende ethubeni lokuzethemba nokuthembeka.
4. Ngingayithola kanjani inombolo yokulandelela ye-oda lami elithunyelwe?
Noma kunini lapho i-oda lakho lithunyelwa, iseluleko sokuthumela sizothunyelwa kuwe ngalo lolo suku nalo lonke ulwazi oluphathelene nalokhu kuthunyelwa kanye nenombolo yokulandelela.
5. Uyinkampani noma inkampani yokuhweba?
Singukuthengisa okuqondile kwasefekthri.
Okwedlule: Ilogo Eshibhile Eyenziwe Ngokwezifiso isikhwama sokuthenga sesikhwama sikakhanvasi isikhwama sikakotini esinelogo
Olandelayo: Isitolo esikhulu esiphrintiwe ngokwezifiso esiphromotha igrosa ukuthenga isikhwama sokuthwala esingalukiwe esingenawo lamination
Izikhwama Zethothi Ezakhiwe Ngokwezifiso Engalukiwe
Izikhwama ze-Tote ezingalukiwe
Isipho SeHemp Esenziwe Ngokwezifiso I-Hessian Yemvelo Yejute Idweba...
Isitolo sokuphromotha segrosa esiphrintiwe ngokwezifiso...
Ilogo Eshibhile Engokwezifiso Iseyili yesikhwama sokuthenga ...
Isikhwama Sokwenza Isikhwama Esijwayelekile Esincane Eco Friendly Eco...
OEM uqobo colorful muslin inkambiso ukotini ...
Ilogo Eyenziwe Ngezifiso Ephrintiwe Isipho Segrosa Esisebenziseka Kabusha P...